Ramos oo ka hadlay nidaamka cusub ee Spanish Super Cup-ka & cadaawada u dhaxeysa isaga iyo Atletico Madrid – Gool FM
Ramos oo ka hadlay nidaamka cusub ee Spanish Super Cup-ka & cadaawada u dhaxeysa isaga iyo Atletico Madrid
(Saudi Arabia) 11 Jan 2020. Kabtanka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa xaqiijiyay inuusan u arkin Atletico Madrid inay cadow ku tahay isaga, kahor kulanka habeen dambe ee Madrid Derby.
Kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa habeen dambe ku balansan inay ku wada ciyaaraan finalka koobka Spanish Super Cup ee lagu qaban doono magaalada Jeddah ee wadanka Saudi Arabia.
Haddaba Sergio Ramos ayaa wareysi uu bixiyay kahor kulanka habeen dambe ee Madrid Derby wuxuu ku sheegay:
“Uma arko Atletico Madrid inay cadowgayga tahay ama koox kale, waa koox dooneysa inay guuleysato anagana sidaas oo kale ayaan dooneynaa inaan sameyno”.
Intaas kaddib Sergio Ramos ayaa wuxuu ka hadlay nidaamka cusub ee loo sameeyay koobka Spanish Super Cup wuxuuna yiri:
“Wax shaqo ah kuma lihin, waxaan qabaa in Xiriirka Kubbadda Cagta uu si wanaagsan u qabtay isla markaana uu u diyaariyey tartanka qaab wanaagsan, ka hor taas waxaa ciyaari jiray labo kooxood, balse hadda waa afar kooxood”.
“Sanadkan waxaan ka faa’iideysanay nidaamka Spanish Super Cup-ka, sababtoo ah sanadkan waa nagula marti qaaday, balse sanadka soo socda waxaa suurtogal ah inaan ku guuleysano hroryaalka ama Copa del Rey”.
“Waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano koob, waxaana heysanaa himilo aanan ka caajisi doonin inaan markale ku soo laabano wadadii aan ugu guuleysan leheyn koobab”.
Horudhac: Aston Villa vs Manchester City… (Sky Blue oo guul u baahan si ay u soo degto kaalinta labaad ee horyaalka?)